Ukusetshenziswa kwesihlahla somdoni ukwelapha izifo – iAfrika
Ukusetshenziswa kwesihlahla somdoni ukwelapha izifo
*Isexwayiso: Okubalulwa ngezansi yilokho abanye babantu basemandulo ababezikhethela khona njengendlela yokuphila. Okuningi kwako sekuguquke futhi sekubhekwa ngamanye amehlo namuhla futhi kwamukeleka ngendlela ehlukile kunaleyo yasemandulo. Konke okwethulwa kule sizindalwazi kudaliwe ngabantu nje futhi akuqinisekisiwe.
Isihlahla somdoni yisihlahla sezithelo ezidliwayo futhi simila endaweni engasemfuleni kodwa futhi umdoni uyakwazi ukuthi uphinde umile ekhaya, egcekeni. Isihlahla somdoni yisihlahla esasikhona ngisho emandulo kusaphila okhokho bethu. Izingane zakudala zazithi uma ziphuma ukuyokha amanzi zidle izindoni, namanje ezindaweni zasemakhaya izingane zisakwenza lokho. Izihlahla ngokwehlukana kwazo siyazi ukuthi zazisetshenziselwa ukwelapha izifo eziningi ekhaya. Isihlahla somdoni akugcini nje ngokuthi sasidliwa, naso sasiphinde sisetshenziselwe ukwelapha njengezinye izihlahla, sisebenza ebantwaneni nakubantu abadala.
Ukusetshenziswa kwesihlahla somdoni enganeni
Isihlahla somdoni enganeni sisetshenziswa uma ingane inesilonda semimoya. Kwakuthathwa amaqabunga aso agaywe aze abe yimvuthu bese kuhlanganiswa namanzi afudumele ingane ichathwe bese iyasinda. Isilonda semimoya yilapho ingane isuke ikhungethwe imimoya yabantu abangasekho. Lokhu kwakuvamise ukuthi kwenzeke enganeni esuke ilanywa yizingane ezingasekho emhlabeni zihluphe leyo ngane ihlale njalo igula. Kuyenzeka ukuthi uma ingane kuyizibulo ekhaya nayo ivamisile ukugula. Isilonda semimoya sibonakala ngokuthi ingane uma izikhulula ikhanule kakhulu ngendlela ebuhlungu, ikhiphe amahlelehlele kanye negazi, ibukeke ikhathele mhlawumbe nomzimba sewehlile. Omama bethu babethatha amaqabunga esihlahla somdoni bayichathe ngawo, lokhu kwakusiza kakhulu ngoba ingane yayiphila ngemuva kokuchathwa.
Akusizo izifo zakudala lezi ukuthi, namanje zisekhona kodwa ngenxa yokushintsha kwezikhathi noma ukungabikho kolwazi oluphelele lokwelapha ngamakhambi esintu, abantu bagcine sebehambisa izingane emitholampilo noma kodokotela.
Ezinye izimpawu ezingaqashelwa uma ingane inesilonda yilezi:
Amehlo ashona phakathi
Ihlo uma livulwa litholakale libomvu ngezansi kwalo
Ukusetshenziswa kwesihlahla somdoni kumuntu omdala
Umuntu omdala angalisebenzisa ikhambi lesihlahla somdoni uma ezwa iqolo libuhlungu noma selimphathe cishe zonke izinsuku. Uyakwazi ukuthi achathe ngalo asinde, liyasiza kakhulu impela uma umuntu elisebenzise ngendlela. Abantu basemakhaya izihlahla zemvelo bayazazi ikakhulukazi eziphathelene nokugula.
Tags Isihlahla somdoni